ब्रास्टेलका फाइदाहरु - ब्रास्टेल रेमिट रेमिटेन्स सेवा
दोहोरो फाइदा !
ब्रास्टेल कार्ड प्रयोग गर्ने ब्रास्टेल रेमिट कस्टमहरुले पैसा पठाउँदा दोहोरो फाईदा पाउँनु हुनेछ ।
आफ्ना सबै कारोवारहरुमा विशेष विनिमय दर प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
साथै, तपाईले गर्नु भएको प्रत्येक रेमिटेन्स पछि डीपाेजिट गर्दा तिरेकाे ट्रान्सफर शुल्क अनुसार तपाईले अाफ्नाे ब्रास्टेल कार्डमा ¥200 वा ¥280 प्राप्त गर्नु हुनेछ, जुन ब्रास्टेलको सबै सेवाहरुमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
यी फाइदाहरु कसरी प्राप्त गर्ने
तपाईको ब्रास्टेल रेमिट एकाउन्टमा साइन इन गर्नुहोस र आफ्नो ब्रास्टेल कार्ड दर्ता गर्नुहोस ।
यदि तपाई सगँ ब्रास्टेल कार्ड छैन भने यहाँ थिच्नुहोस र कसरी कार्ड प्राप्त गर्ने थाहा पाउनुहोस !
ब्रास्टेल कार्ड के हो ?
ब्रास्टेल कार्ड जापान अन्य देशहरुबाट अन्तराष्ट्रिय र लोकल कलहरु गर्ने रिचार्जएबल प्रिपेड कार्ड हो । यसका अन्य सेवाहरु अन्तराष्ट्रिय एस एम एस, अन्तराष्ट्रिय कल फर्वडिङ हुन्, साथै यसमा भएको क्रेडिटबाट तपाईले आफ्ना प्रियजनहरुलाई गिफ्ट र सपिङ भाउचर पठाउँन र वहाँहरुको प्रिपेड फोनमा रिचार्ज पनि पठाउँन सक्नु हुन्छ । ब्रास्टेल कार्डको बारेमा अधिक जानकारीको लागि हेर्नुहोस brastel.com वा कस्टमर सर्भिसमा सम्पर्क गर्नुहोस ।
याेजनाकाे बाेनस प्राप्त गर्नलार्इ तपाईले अाफ्नाे ब्रास्टेल कार्ड तपाईको ब्रास्टेल रेमिट एकाउन्टमा दर्ता गराएको हुनुपर्छ ।
तपाईले पैसा पठाउँने मिति भन्दा अघिल्लो तीन महिनामा अाफ्नाे ब्रास्टेल कार्डमा न्युनतम ¥2,000 को रिचार्ज गर्नु भएको भए मात्र तपाईले स्वत विशेष विनिमय दर प्राप्त गर्नु हुनेछ । अन्य ब्रास्टेल कार्डबाट गरिएको क्रेडिट ट्रान्सफर मान्य हुने छैन ।
याेजना मार्फत प्राप्त भएकाे डिपाेजीटको साटो पैसा लिन मिल्दैन र यो ६ महिना भित्र चलार्इसक्नु पर्छ ।
रेमिटेन्स प्रोसेस भएको २ कार्य दिवस भित्र तपाईको कार्डमा यो याेजनाकाे बाेनस लागू हुनेछ ।
यो योजना इन्डिया / इन्डोनेसिया / फिलिपिन्स / र श्री लंकाको लागि मात्र लागू हुनेछ ।
बिना पूर्व सुचना यो योजना परिवर्तन, खारेज वा स्थगन गर्ने वा यसका नियम तथा शर्तहरु परिवर्तन गर्ने अधिकार ब्रास्टेल सगँ छ ।
तिर्नु भएकाे ट्रान्सफर शुल्क अनुसार याेजनाकाे बाेनस पाउनुहुनेछ, ¥880 ट्रान्सफर शुल्क तिरे ¥200 बाेनस र ¥1,480 वा ¥1,680 ट्रान्सफर शुल्क तिरे ¥280 बाेनस ।
ब्रास्टेल रेमिट कार्ड प्रयाेग गर्दा याे याेजना लागू हुने छैन ।
नियम र शर्तहरु गोपनियताको नीति व्यक्तिगत जानकारी व्यवस्थापनको निति असामाजिक तत्वहरु बारे वक्तव्य रेमिटेन्सका नियमहरु असामाजिक तत्वहरु विरुद्द घोषणा इलेक्ट्रोनिक डेलिभरी
यहाँ थिच्नुहोस सिजी मनी बारे अधिक जानकारीको लागि ।
यहाँ थिच्नुहोस चाइना बैंक ट्रान्सफर बारे अधिक जानकारीको लागि ।
यहाँ थिच्नुहोस बंगलादेश bKash बारे अधिक जानकारीको लागि ।
रिया फाइन्यान्सियल सर्भिसेस म्यानमारबारे थप जानकारीकाे लागी यहाँ थिच्नुहाेस ।
रिया फाइन्यान्सियल सर्भिसेस सिएरा लिवाेनबारे थप जानकारीकाे लागी यहाँ थिच्नुहाेस ।
व्यक्तिगत जानकारी व्यवस्थापनको निति
यदि तपाई सगँ ब्रास्टेल कार्ड छैन भने यहाँ थिच्नुहोस[/1] र कसरी कार्ड प्राप्त गर्ने थाहा पाउनुहोस !
ब्रास्टेल कार्ड जापान अन्य देशहरुबाट अन्तराष्ट्रिय र लोकल कलहरु गर्ने रिचार्जएबल प्रिपेड कार्ड हो । यसका अन्य सेवाहरु अन्तराष्ट्रिय एस एम एस, अन्तराष्ट्रिय कल फर्वडिङ हुन्, साथै यसमा भएको क्रेडिटबाट तपाईले आफ्ना प्रियजनहरुलाई गिफ्ट र सपिङ भाउचर पठाउँन र वहाँहरुको प्रिपेड फोनमा रिचार्ज पनि पठाउँन सक्नु हुन्छ । ब्रास्टेल कार्डको बारेमा अधिक जानकारीको लागि हेर्नुहोस brastel.com[/1] वा कस्टमर सर्भिसमा सम्पर्क गर्नुहोस ।
विशेष विनिमय दर !
विशेष विनिमय दर कसरी प्राप्त गर्ने ?
तपाईको ब्रास्टेल कार्ड पैसा पठाउँने मिति भन्दा अधिल्लो तीन महिनामा न्युनतम ¥2,000 को रिचार्ज भएको भए मात्र तपाईले स्वत विशेष विनिमय दर प्राप्त गर्नु हुनेछ । अन्य ब्रास्टेल कार्डबाट गरिएको क्रेडिट ट्रान्सफर मान्य हुने छैन ।